Kim Jong Kook ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ခံယူချက်နဲ့ သူဖြစ်ချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးပုံစံက ဘယ်လိုလဲ? | News Bar Myanmar
Kim Jong Kook ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ခံယူချက်နဲ့ သူဖြစ်ချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးပုံစံက ဘယ်လိုလဲ?
​ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ‘My Ugly Duckling’ အစီအစဉ်ရဲ့ အပိုင်းသစ်မှာတော့ Kim Jong Kook တစ်ယောက်ဟာ အဆိုတော် Tony Ahn ရဲ့ အမေပိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားပြီး ရင်းနှီးတဲ့ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တဲ့ Yang Se Chan, Ji Suk Jin တို့အပြင် Hwang Jae Sung နဲ့ပါ စကားလက်ဆုံ ကျခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Kim Jong Kook ကတော့ သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်ခံယူချက်ကို ဒီလိုပဲဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ ‘ကျွန်တော်ကတော့ အမျိုးသမီးဆီမှာပဲ စိတ်ကိုမြုပ်နှံထားတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ဇနီးက သားသမီးတွေထက်တောင် ပိုအရေးပါဦးမယ်ထင်တယ်’ လို့ ဆိုပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဆက်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတွေက အိပ်ရာမခင်းတာလေးကြောင့်တောင် ဇနီးသည်ရဲ့ ဒေါသထွက်တာကို ခံဖူးကြောင်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာလဲ လူပျိုကြီး Kim Jong Kook တစ်ယောက်ကတော့ ‘ဇနီးက ဒီကိစ္စကြောင့် ခံစားရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအိပ်ရာကိုခင်းလိုက်လေ’ လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
သူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရင် လူပျိုကြီးကုကုလေးတို့ကတော့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ တကယ်ကိုကြင်နာတတ်ပြီး ခင်ပွန်းကောင်းပီသမှာသေချာနေတာမို့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သတင်းကောင်းကြားရဖို့ မျှော်လင့်နေပါပြီ။ သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဇနီးကလဲ တကယ်ကို ကံကောင်းမှာပါနော်။
(Zawgyi) Kim Jong Kook ရဲ့အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚ ခံယူခ်က္နဲ႔ သူျဖစ္ခ်င္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးပုံစံက ဘယ္လိုလဲ?
​ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ ‘My Ugly Duckling’ အစီအစဥ္ရဲ့ အပိုင္းသစ္မွာေတာ့ Kim Jong Kook တစ္ေယာက္ဟာ အဆိုေတာ္ Tony Ahn ရဲ့ အေမပိုင္တဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ကိုသြားၿပီး ရင္းႏွီးတဲ့ညီအစ္ကိုေတြျဖစ္တဲ့ Yang Se Chan, Ji Suk Jin တို႔အျပင္ Hwang Jae Sung နဲ႔ပါ စကားလက္ဆုံ က်ခဲ့ၾကပါတယ္။
သူတို႔ဟာ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး Kim Jong Kook ကေတာ့ သူ႔ရဲ့အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚခံယူခ်က္ကို ဒီလိုပဲဖြင့္ဟခဲ့ပါတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးဆီမွာပဲ စိတ္ကိုျမဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေယာက္်ားျဖစ္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဇနီးက သားသမီးေတြထက္ေတာင္ ပိုအေရးပါဦးမယ္ထင္တယ္’ လို႔ ဆိုပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဆက္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသားေတြက အိပ္ရာမခင္းတာေလးေၾကာင့္ေတာင္ ဇနီးသည္ရဲ့ ေဒါသထြက္တာကို ခံဖူးေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာလဲ လူပ်ိဳႀကီး Kim Jong Kook တစ္ေယာက္ကေတာ့ ‘ဇနီးက ဒီကိစၥေၾကာင့္ ခံစားရမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအိပ္ရာကိုခင္းလိုက္ေလ’ လို႔ ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။
သူေျပာတဲ့စကားေတြကိုၾကည့္ရင္ လူပ်ိဳႀကီးကုကုေလးတို႔ကေတာ့ အိမ္ေထာင္က်တဲ့အခါ တကယ္ကိုၾကင္နာတတ္ၿပီး ခင္ပြန္းေကာင္းပီသမွာေသခ်ာေနတာမို႔ ပရိတ္သတ္ေတြကေတာ့ သတင္းေကာင္းၾကားရဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ေနပါၿပီ။ သူ႔ရဲ့အနာဂတ္ဇနီးကလဲ တကယ္ကို ကံေကာင္းမွာပါေနာ္။
Next BTS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကြောက်ခမန်းလိလိဝင်ငွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများ »
Previous « V အတွက် တရုတ်ပရိတ်သတ်တွေပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လက်ဆောင်